मानवअधिकार एलाइन्स काठमाडौ शाखाको छैटौ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न। - Himalay Online Media
मानवअधिकार एलाइन्स काठमाडौ शाखाको छैटौ जिल्ला अधिवेशन नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारको आन्दोलनमा अनवरत रुपमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरु शुसिल प्याकुरेल, शान्ति अधिकारी, डा. सर्वराज खड्का लगायलले नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनको इतिहास, वर्तमान अवस्था र आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका बारे मन्तव्य राख्नुभयो । एलाइन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष मिनबहादुर शाहीले एलाइन्सका गतिविधि र आगामी कार्ययोजना राख्दै जिल्ला शाखालाई केन्द्रको तर्फबाट आवश्यक निर्देशन समेत दिनु भएको थियो।
कार्यक्रममा एलाइन्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर नेपाल, महासचिव डा. पदमप्रसाद खतिवडा, पेशागत विशेष जिल्ला कमिटी अध्यष प्रेम पराजुली लगायत मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुको विशेष उपस्थिति रहेको थियो ।
अधिवेशनले ध्रुवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत रुपमा गठन गरेको छ । उपाध्यक्षमा तेजप्रसाद तिमल्सिनी, सचिव मोहन गौतम, कोषाध्यक्ष शारदा कोइराला निर्वाचित भएका छन भने सदस्य हरुमा नारायण भट्टराई, अनिशा भण्डारी, ललिता उप्रेती, विन्दी भण्डारी, सरिता सापकोटा र प्रशान्त डंगाेल निर्वाचित भएका छन ।
दलित सङ्गठनहरूद्वारा रम्तेलको सम्झना
गैडाको आक्रमणबाट तीन जना घाईते।
विदेशी नाम र शूल्क विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको आन्दोलन
मधेस अलग गर्ने ‘ग्राण्ड डिजाइन भन्दै चित्रबहादुर केसी जंगिए भिडियो सहित।